गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि एक औषधि जस्तै हो, के के छन् त फाइदा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि एक औषधि जस्तै हो, के के छन् त फाइदा !!
गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि एक औषधि जस्तै हो, के के छन् त फाइदा !!
गाईको घिउ हाम्रो शरीरको लागि एक औषधिजस्तै छ । जो हामीलाई धेरै रोगहरुबाट मुक्त गर्छ ।गाईको घिउ नियमित खाँदा शरीरको तौल स्थिर रहन्छ भने शरीरमा शक्ति पनि बढ्छ । यो बाहेक गाईको घिउ मानसिक स्वास्थ्य र छालाको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
गाईको घिउमा यस्ता कैयौं माइक्रोन्यूट्रिअन्ट्स हुन्छन्, जसमा क्यान्सरजस्ता रोगहरुसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । वैज्ञानिकहरु गाईको घिउमा विषहरण गर्नसक्ने क्षमता भएको तत्व हुने बताउँछन् जसले क्यान्सर रोग लाग्नबाट समेत बचाउउँछ ।
कपाल झर्ने समस्याबाट धेरै महिलाहरू ग्रसित छन् । यसबाट बच्नका लागि दिनदिनै गाईको घिउ एक चम्चा खाने गर्नुस् ।एसिडिटीको समस्या भएमा दिनदिनै गाईको घिउ खानुहोस् । एसिडटीका साथसाथै कब्जियतको समस्या पनि भाग्छ ।
कानको जाली बिग्रँदा असाध्यै पीडा हुन्छ र सुन्ने शक्ति पनि कमजोर हुन्छ । तर गाईको घिउका केही थोपा नाकमा दिनदिनै हाल्ने गर्नुभयो भने फाइदा हुन्छ ।गाईको घिउले पाइतलामा मालिश गर्नाले हातगोडा पोल्ने समस्या ठीक हुन्छ ।
२४ बर्षपछि हरेक महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्ने ५ परीक्षण : हरेक महिलाले अवश्य पढ्नुहोला
हल्का भुटेको ६ पोटि लसुनको सेवन गर्नुहोस्, २४ घण्टा भित्र मिल्ने`छ यस्तो चम`त्कारिक फाइदा !
ढाड दु`ख्ने समस्या देखि आजित हुनु हुन्छ ? कपुर बन्न सक्छ ढाड दु`ख्ने समस्याको अचूक औषधि !